Blinken oo ku sugan India
U.S. Secretary of State Blinken holds a media briefing on Afghanistan, in Washington
Tani waa faallo ka tarjumeysa arragtida dowladda Mareykanka
Waxaa aad u yar jiritaanka xiriir ka muhiimsan midka u dhaxeeya Mareykanka iyo Hindiya, ”ayuu yiri Xoghayaha Arrimaha Dibadda Antony Blinken ka dib markii uu kula kulmay New Delhi Wasiirka Arrimaha Dibadda Hindiya Subrahmanyam Jaishankar.
Iyadoo ay goob joog ahaayeen warbaahinta markii ay kulmayeen labada hoggaamiye, Xoghaye Blinken wuxuu ku nuuxnuuxsaday xiriirka dabiiciga ah ee ka dhexeeya Hindiya iyo Maraykanka: waa laba ka mid ah hoggaamiyayasha dimoqraadiyadda adduunka; laba ka mid ah kuwa ugu weyn dhaqaalaha adduunka, kana mid ah kuwa ugu horreyaa ee sii daaya kaarboonka.
Waxa uu sheegey inay safka hore kaga jiraan wax ka qabashada dhibaatada cimilada, ayna diiradda saaraan dhaqaalaha cusub ee cagaaran. Labada dalba waxay ka faa'iideystaan dadyow kala duwan iyo hal -abuur nafsaani ah. “Wadajir ahaan, ficillada ay Hindiya iyo Mareykanka qaadayaan ayaa qaabeynaya qarnigii 21 -aad iyo wixii ka dambeeya,” ayuu yiri Xoghaye Blinken.
Arrimaha muhiimka ah ee ay labada hoggaamiye ka wada hadleen, COVID ayaa ugu sarreeya ajandaha. Dowladda Mareykanka ayaa ku tabarucday Hindiya in ka badan $ 200 milyan oo loogu talagalay gargaarka COVID-19. Xoghayaha Blinken ayaa ku dhawaaqay, inay diri doonaan $ 25 milyan oo dheeri ah si loogu taageero dadaallada tallaalka guud ahaan Hindiya. Maalgelinta dheeraadka ah waxay xoojin doontaa saadka silsiladda sahayda tallaalka, waxay wax ka qaban doontaa macluumaad khaldan, waxayna gacan ka geysan doontaa tababaridda shaqaale daryeel caafimaad oo badan. Intaa waxaa dheer, Mareykanka iyo Hindiya waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo soo afjari lahaa masiibada, oo ay ku jirto iskaashiga tallaalka ee ay wadaagaan waddamada la isku yiraahdo Quad - ee kala ah Hindiya, Mareykanka, Australia, iyo Japan - kuwaas oo gobolka u keeni doona tallaallo nabdoon oo wax ku ool ah.
Arrimaha amniga gobolka ayaa sidoo kale laga wada hadlay, oo ay ku jirto baahida loo qabo in la ilaaliyo lana furo Indo-Pacific, iyo sidoo kale yoolka ah in la gaaro “Afgaanistaan oo nabad ah, amni leh, oo xasilloon.” Labada hoggaamiye ayaa isku raacay in aan xal ciidan lagu gaari karin dhammeynta qalalaasaha. “Waxaa jira hal waddo,” ayuu yiri Xoghaye Blinken, “taasina waxay lagu gaari karaa miiska wada -xaajoodka si loo xaliyo khilaafka, lana helo Afgaanistaan oo lagu maamulo qaab loo dhan yahay taasina waa wakiilka dadka reer Afghanistan oo idil.
Qeyb kale oo muhiim ah oo ka mid ah wadahadalka ayaa diiradda lagu saaray qiyamka la wadaago iyo dhaqanka dimoqraadiga ah. “Annaga oo ah laba ka mid ah dimoqraadiyadda ugu horreysa adduunka, waxaan si dhab ah u qaadnaa mas’uuliyadaha naga saaran inaan gaarsiinno xorriyadda, sinnaanta iyo fursadda dhammaan dadkeenna. Waana ognahay inay tahay inaan si joogto ah wax badan u qabanno… Qeyb ka mid ah ballanqaadka dimuqraadiyadda ayaa ah dadaalka joogtada ah ee diiradda lagu saarayo wanaagga, ”ayuu yiri Xoghaye Blinken.
“Sida kuweenna oo kale, dimuqraadiyadda Hindiya waxay ku shaqeeysaa fikirka muwaadiniinteeda xorta ah. Waan bogaadinaynaa taas, ”ayuu yiri Xoghaye Blinken,“ isagoo intaas ku daray "waxaanna u aragnaa dimuqraadiyadda Hindiya inay tahay awood wanaagsan u tahay difaaca Indo-Pacific oo xor ah oo furan iyo duni xor ah oo furan.